HomeWararka MaantaShan Sababood Oo Barcelona Ku Xulatay Yerry Mina
Haddaba, Barcelona ayaa la ogaaday sababihii ay ku xulatay ciyaartoygan oo ay ka eegtay shan arrimood, kuwaas oo sabab u noqday inay ku bixiso lacag badan, isla markaana ku aaminto khadkeeda difaaca iyo booska uu bannaynayo Mascherano.
Shanta arrimood ee Barcelona ay ku xulatay ciyaartoygan oo shabakadda Cadalool.com ay Afsoomaali ka dhigtay, waxay kala yihiin sidan:
1. Awoodda kubbadaha sare
Waa ciyaartoy dheer oo lagu qiyaasay 1.93 mitir oo ka dhigaysa inuu ka mid yahay laacibiinta ugu dheer kubadda cagta. Khadka dambe ee difaaca ee uu hibada u leeyahay inuu ka ciyaaro, marnaba suurtogal maaha in weeraryahannadu fursad u helaan inay kubbad ka madaxeeyaan. Marka koorne lasoo laago, inta badan madaxiisa ayaa uu la helaa, iyadoo aad mooddo inay ballansan yihiin. Intii uu ka ciyaarayay horyaalka waddanka Brazil, waxa uu ka mid noqday difaacyahannada qaaradda Latin America ugu gool-dhalinta badan, kuwaas oo dhamaantood uu ku dhaliyey madaxa.
2. Xiradda Difaaca:
Inkasta oo uu yahay ciyaartoy dheer, haddana awoodda uu u leeyahay kubbadaha hoose ee dhulka socda iyo kuwa ciyaartooyada dhexdooda ku jira, waxa uu ka mid yahay xiddigaha ugu wanaagsan. Ka sokow farsamada, waxa uu leeyahay awood jidheed iyadoo miisaankiisu yahay 75 kgs. Intii uu joogay horyaalka waddanka Brazil, waxa uu horumar badan ka sameeyey qaabka difaaca iyo farsamooyinka looga reebo kubbadda weeraryahannada, waxaana taas u dheer xawaare dheereeya.
Marka uu kubadda difaacayo, uma eka ciyaartoy uu culays saaran yahay, waxaanad moodaa in uu khadka dhexe ka ciyaarayo. Kubbad jiidis, dhiibis iyo inuu la socdo dhaqdhaaqa dhinacyadiisa ayaa lagu yaqaanaa, waxaanay taasi si fiican ula jaan-qaadaysaa hannaanka ciyaareed ee Barcelona.
4. Kaadh La’aan
Fal-celintiisa degdegga iyo in aanu gelin khalad, waxay ka dhigaysaa ciyaartoy cajjiib ah oo haddana kaadhadhkiisu aad u yar yihiin. Illaa hadda, intii uu ciyaaraha ku jiray, hal mar ayaa kaadh cas la siiyey, kaas oo ahaa kulan ay Palmeiras 2013 la ciyaartay Deportivo Pasto.
5. Filashada Wacan:
Waa 23 jir boos joogto ah ka haysa xulka qaranka Colombia ee Koobka adduunka 2018 ka qayb-gelaya, waxaana lagu tilmaamay ciyaartoyga ugu wanaagsanaan doona tartankaas kasoo bixi doona.
Laacibka Manchester United Ee Marouane Fellaini Oo Heshiis U Saxeexay Besiktas
04/11/2017 Abdiwahab Ahmed